Archive du 20161108
Savorovoro, delestazy, asan-dahalo Malemy ny fanjakana
Hita taratra tamin�ny fanambarana nataon�ny filoham-pirenena tany Vohipeno sy ny valin-tenin�ny praiminisitra teny Mahazoarivo raha niresaka tamin�ny mpanao gazety izy omaly fa difotry ny olana ny fitondram-panjakana ka sahirana mikaroka vahaolana.
Fikambanana Grand-Tana Voafidy ho filoha i Lalao Ravalomanana
Nivory voalohany omaly tolakandro tetsy amin�ny lapan�ny tan�na Analakely ny fikambanan�ireo ben�ny tan�na eto Antananarivo sy ny manodidina.
Fitsaram-bahoaka Naneho ny heviny ny filoham-pirenena
Naneho ny heviny tany Vohipeno, omaly, taorian�ny fitsaram-bahoaka nifanesisesy tamina faritra maro teto amin�ny nosy ny filoha Hery Rajaonarimampianina.
Fitrandrahana safira any Bemainty Gaboraraka tanteraka
Ankoatra ny fitsaram-bahoaka etsy sy eroa dia mirongatra koa ny fitrandrahana harena ankibon�ny tany tsy ara-dal�na eto amintsika.
Zarazarao hanjakana foana ve ?
Mitana ny sain�ny olona maro maneran-tany ny zava-misy any Etazonia amin�izao fotoana izao. Hotanterahina anio ny fifidianana filoham-pirenena izay tsy misy afa tsy kandida roa dia ny repoblikanina sy ny demokraty.
Fitsaram-bahoaka mirongatra Misy ambadika politika ?
Matetika ny minisi-panjakana, Narson Rafidimanana sy ny filoham-pirenena,
Nivadika ny fanjakana Hitokona indray ny SECES
Mananontanona indray ny fitokonan�ny SECES (sendikan�ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka-mpampianatra).
Sendikan�ny Taxi Mety haverina ny fifidianana izay ho filohany
Mety haverina ny fifidianana izay ho filohan�ny sendika hivondronan�ny fikambanan�ireo fiarakaretsaka matihanina eto an-drenivohitra
Ozinina Miaramila ao Moramanga Hiverina hiasa indray
Nijery ifotony ny zava-misy momba ilay ozinina miaramila any Moramanga ny faran�ny herinandro teo ny delegasiona avy amin�ny foloalindahy notarihan�ny minisitry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Kaxier B�ni Rasolofonirina.
Pasitora Rakotonirina David Tsy manao politika na manohana antoko politika ny fiangonana
Tontosa soa aman-tsara tsy nisy tomika teny Antsahamanitra ny alahady faha-6 novambra lasa teo ny fametrahana tamim-pomba ofisialy ny komity Foiben�ny Flm vao voafidy farany teo tany antsirabe.